Amaro aan caadi aheyn oo lagu soo rogay ajaaniibta ku sugan mid kamid ah gobollada dalka Somalia - Caasimada Online
Home Warar Amaro aan caadi aheyn oo lagu soo rogay ajaaniibta ku sugan mid...
Amaro aan caadi aheyn oo lagu soo rogay ajaaniibta ku sugan mid kamid ah gobollada dalka Somalia
Afgooye (Caasimada Online) – Amar kasoo baxay Wasaarada amniga maamulka Koofur Galbeed ayaa waxaa la duldhigay dhammaan Ajaaniibta ka howlgasha deegaanada maamulka.
Amarka kasoo baxay Wasaarada ayaa waxa uu si toosa ugu socdaa ajaanibta ka shaqeysa Hay`adaha ka howgalo deegaanada Koonfur Galbeed, kuwaas oo laga dalbaday in ay isdiiwaan geliyaan.
Wasiirka Wasaarada amniga ee Koofur Galbeed oo soo saaray amarka ayaa sheegay inay muhiim tahay in lala socdo dhaqdhaqaaqa iyo shaqooyinka Ajaaniibta, sidaa aawgeed laga doonaayo inay isdiiwaan galiyaan.
Waxa uu Wasiirka amarkiisa ku sheegay in diiwaan galinta ay kor u qaadeyso in lala socdo xaalada guud iyo tan amniyeen ee Ajaaniibta.
Wasiirka ayaa sheegay in ay muhiim tahay in ay ka warqabaan ajaanibta ku sugan deegaanada maamulkaas maadaama ayuu yiri magaalada Muqdisho lagu afduubtay Haweeney u shaqeyneysay hay`adda Laan kheyrta Cas ee ICRC una dhalatay dalka Jarmalka.
Amarka Wasiirka Wasaarada amniga ee Koofur Galbeed, ayaa kusoo beegmaaya iyadoo Gobolka Banaadir iyo gobolada kale ee dalka ay ku sugan yihiin ajaanib fara badan kuwaas oo aan la ogeyn inta ay la egyihiin tiradooda.